China OEB5 Injectable oncology vial turnkey plant emepụta na ndị na -eweta ya IVEN
Oncology (Ọgwụ & OSD)
Kedu ihe IVEN Injectable oncology vial turnkey plant gụnyere:
Ngwọta injinịa agbakwunyere IVEN maka ụlọ ọrụ ọgwụ vial oncology injectable gụnyere ụlọ dị ọcha, njikwa akpaaka na sistemụ nleba anya, usoro ọgwụgwọ mmiri ọgwụ, ịkwadebe na nkesa nkesa, ịsa vial - sterilizing na depyrogenation - nju - nkwụsị - ịcha akwa - ịsa ahụ na mpụga, ifriizi sistemụ ihicha, sistemụ mwepu, sistemụ mbukota, sistemụ lọjistik akpaka, sistemụ njikwa mma, ụlọ nyocha etiti na wdg. Lekwasịrị anya n'ihe ndị ahịa chọrọ, IVEN na -ahazi usoro injinịa nke ọma maka ndị ọrụ na:
1. Ịsa ahụ oncology vial ịsa - sterilizing na depyrogenation - ndochi - ịkwụsị - ịcha akwa - ahịrị mmepụta ịsa mpụga:
A na-eji ahịrị a na-emepụta vials oncology injectable, nke nwere igwe ise: Full Servo Driven Vertical Ultrasonic Washing Machine, Hot Air Circulation Sterilizing & Depyrogenation Tunnel, Full Servo Driven Vial Fill-Stoppering Machine, Vial Capping Machine na igwe ịsa ahụ na mpụga.
Mgbe o juputara, ọ ga-aga na ọkara nkwụsị na njikere maka ihicha nkụ, wee kwaga na igwe mkpuchi, mgbe nke ahụ gasị, ọ ga-aga na igwe ịsa ahụ na mpụga. Anyị na -anabata usoro ịtụ ihe dị n'ịntanetị maka igwe na -ejuputa, a ga -ajụ ngwaahịa na -erughị eru na akpaghị aka.
3. Njuputa & nkwụsị
5. Ịsacha na mpụga
2.Freeze draya na akpaaka loading na ebutu usoro:
Maka ngwaahịa lyophilized, mgbe o juputara na ọkara kwụsịtụrụ, a ga-ebuga ya na friza (Lyophilizer) na-akpaghị aka site na sistemụ itinye akpaaka, mgbe lyophilized gasịrị, a ga-ebuga ya na igwe mkpuchi site na sistemụ nbudata na akpaaka.
3. Usoro iche:
Ebe oncology bụ ngwaahịa na -egbu egbu, anyị nwere ike kwadebe ya na onye na -ekewapụ ichebe nchekwa nke ndị na -arụ ọrụ na ngwaahịa ahụ, iji hụ na echekwara usoro nrụpụta n'okpuru sistemụ iche.
1.Operator na -ekewapụ onwe ya kpam kpam site na mpaghara mmepụta isi.
2. A larịị esịtidem mmepụta ebe. Ime ụlọ dị ọcha mpụga C/D.
3. Naanị nwere ike mepee onye na -anọpụ iche mgbe emechiri sistemụ, nyocha dị mkpa maka ịmalitegharị.
4.Customize HPVS maka sterilization ụlọ.
5.Sealing mgbasa usoro.
6.Adopt ntinye ikuku HEPA, akpụkpọ ahụ nwere ike ichebe ikuku ikuku edo edo na nzacha.
7.Seamless esịtidem Ọdịdị, agba gburugburu imewe.
8.Adopt akara inflatable maka ọnụ ụzọ mepere emepe na windo ogwe aka.
9.N'ihi ngwaahịa na-egbu egbu, jiri nhazi akpa-n'ime-akpa.
1.CIP/SIP sistemụ (SIP site na VHP).
3. Sampler nke nwere ike ịfe n'ọdụ ụgbọ elu.
5.Leak Detector nke uwe aka.
6. Igwe ọkụ.
7.H/T ihe mmetụta.
10. Ngwa nlele ikuku.
11. akpa-in-akpa-si Myọcha Na-agbanwe agbanwe Housing.
Ọ nwere ike mechaa nyocha oncology vial oncology akpaka, nyocha mgbapụta, akara, ọnya na mbukota katọn, yana mbupu katọn.
5.Pharmaceutical mmiri ọgwụgwọ:
7.Clean ụlọ & HVAC:
Ọ gụnyere ogwe mgbidi ụlọ dị ọcha, ogidi ụlọ, windo, ọnụ ụzọ, ala, ọkụ, igwe njikwa ikuku, ihe nzacha HEPA, ọwa ikuku, ihe na -emenye ụjọ, sistemụ njikwa akpaaka wdg.... .
Ọ gụnyere sistemụ ikuku ikuku na sistemụ ji esi mmiri iji nye ikuku mkpakọ na uzuoku maka mmepụta oncology vial injectable.
9. Ụlọ nyocha:
Ọ gụnyere ụdị ngwa nyocha ụlọ nyocha niile, yana arịa ụlọ nyocha iji nwalee nlele oncology vial oncology na akụrụngwa, dị ka ụlọ nkwụsi ike, HPLC, mmịkọ atọm, ultraviolet spectrometer, fourier na -agbanwe spectrometer infrared wdg.
Usoro nkesa na pipeline:
Ọ na -agụnye ụdị pipeline usoro na paịpụ ụlọ ọrụ dị mkpa na osisi turnkey vial oncology, dị ka mmiri dị ọcha, mmiri ntụtụ, uzuoku dị ọcha, mmiri jụrụ oyi, mmiri jụrụ oyi, ikuku mkpakọ, uzuoku ụlọ ọrụ wdg.
IVEN nwere ndị otu ọrụ nka na injinịa ọkachamara, ọzụzụ anyị nọ ebe a na nkwado ahịa mgbe ọ bụla nwere ike inye nkwa ọrụ aka ogologo oge maka osisi mgbanaka oncology vial oncology injectable:
Oke ikike nke IVEN incology oncology vial turnkey plant:
Nke gara aga: Akpa na-abụghị PVC dị nro IV ihe ọkụkụ turnkey
Osote: Agụụ ọbara nchịkọta tube turnkey osisi
Vial Na -ejuputa igwe
Ndị na -emepụta igwe na -ejuputa vial
vial turnkey osisi
Igwe Ampoule À Coudre Led, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Ampoule Machine À Coudre Bernina,